မြန်မာအစိုးရ ” ဒါလားမျှတတဲ့ တရားစီရင်မှု?” | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« “ပြောင်ပြောင်တို့ကတော့ နောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင်နေတာ မဟုတ်ပါ အများရှေ့တင် ကြိုးရှုပ်အောင်လုပ်နေတဲ့ သူပါ
Wira Thu and Rajapaksas’ Marriage Made In Hell »
မြန်မာအစိုးရ ” ဒါလားမျှတတဲ့ တရားစီရင်မှု?”
Minko Naing တော်တော်တရားမျှတကြတာပေါ့။အဲဒီခွေးမသားတရားသူကြီးသူ့မိသားစုခံရရင်ကော
CREDIT TO AUNG MIN KHANT Baydar Lam‘s photo.” ဒါလားမျှတတဲ့ တရားစီရင်မှု”
မတ်လ(၂၂)ရက်နေ့သောကြာနေ့နေလည်(၁၁း၃၀)မိနစ်လောက်မှာမိတ္ထီလာပဋိပက္ခကြောင့်ကြောက်လန့်တကြားထွက်ပြေး လာတဲ့နန်းတော်ကုန်းရပ်ကွက်ကစက်ဘီးပြင် ဆိုင်ဖွင့်ပြီးလုပ်ကိုင်စားသောက်နေတဲ့အပြစ်မဲ့တဲ့မိသားစုတစုကိုအကြမ်းဖက် သမားတွေကနန်းတော်ကုန်းသံလမ်းနားမှာတွေ.သွားပြီးလာဝှက်ပေးမယ်လို့ခေါ်ကာ ဓားနဲ့ခုတ်သတ်ပြီးအလောင်းတွေကိုမီးရှို.ဖျောက်ဖျက်ပြစ်ခဲ့ကြတယ်။မီးလောင်ပြီးခါနီးကျမှ
အလောင်းတွေပေါ်ကိုသင်္ဃန်းအုပ်ကာဘုန်းကြီးတွေ အသတ်ခံရတယ်လို့ထင် အောင်ယုတ်မာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
သူမကိုပါသတ်ဖြတ်ဖို့လုပ် တဲ့အခါလက်ထဲကချီထားတဲ့သူမရဲ.လသားအရွယ်ကလေးကို”မ” ပြပြီးမသတ်ဖို့တောင်းပန်တော့မှ “ဟေ့..ကုလားမ ဒါဆို နင်နောက်ကိုပြန်လှည့်မကြည့်နဲ့..ကြည့်ရင် နင့်ကိုပါသတ်မယ်လို့ပြောတဲ့အတွက် သူ့ရှေ.မှာတင်ရက်ရက်စက်စက်အသတ်ခံ ခဲ့ရတဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုထားခဲ့ပြီးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အသတ်ခံခဲ့ကြရတဲ့သူတွေကတော့သူမရဲ.ယောက်ခထီး ဦးမောင်မောင်မြင့်အသက်(ရ၃)နှစ်၊သူမရဲ.ခင်ပွန်း ဦးမိုးဇော်အသက်(၃၄)နှစ်၊သူမရဲ.သားသမီးကျောင်းသားကျောင်းသူလေးဖြစ် ကြတဲ့ မောင်ရန်ပိုင်စိုး(၁၁)နှစ်နဲ့မနွယ်နွယ်စိုး(၉)နှစ်အရွယ်ကလေးတို့ကိုရက်ရက်စက်စက်ဓားနဲ့ခုတ်သတ်ပြီးမီးရှိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့ အဲဒီလူမဆန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုကိုကျုးလွန်ခဲ့တဲ့မောင်တာတာစိုးကိုဇွန်လ (၂၈)ရက်နေ့ကပုဒ်မ ၃၀၂/၄၃၆/၁၁၄ အလုပ်ကြမ်းနဲ့ထောင်(ရ)နှစ်ချခဲ့တယ်လို့ ဒီနေ့ ၄-၆-၂၀၁၃ ရက်နေ့ထုတ်ဆဲဗင်းဒေးနေ့စဉ်သတင်းစာမှာရေးသားထားပါတယ်။အာဏာပိုင်တွေ အနေနဲ.ဒီလိုလူလေးယောက်ကိုရက်စက်စွာသတ်ဖြတ်ခဲ့သူကိုထောင်(ရ)နှစ်ပဲချခဲ့တာဟာအာဏာပိုင်တွေကိုယ်တိုင်ရာဇဝတ်မှုကျုးလွန်လိုက်တာလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထွက်ပြေးနေတဲ့တရားခံကတော့ အငယ်ကောင်(ခ)စိုးမိုးသူဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းစာမှာသူကျုးလွန်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုတွေအတွက်
ထောင်ဒဏ်ဘယ်လောက်ကျခံပြီးသလဲဆိုတာကိုရှင်းလင်းစွာဖော်ပြမထားပါဘူး။ဒီလူမဆန်တဲ့အကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်မှုဟာ နိုင်ငံတကာက မတော်မတရားစွတ်စွဲနေတာပါလို့ မိုးကြိုးပစ်တာကို ထန်းလက်နဲ့ကာနေတဲ့သူတွေအတွက်တော့ အကောင်းဆုံးသက်သေတခုပါပဲ။
သင်ပြုသည့်ကံ ပဲ့တင်သံ သင့်ထံပြန်လာပါစေ။…….
This entry was posted on July 4, 2013 at 7:44 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.